Soomaaliya, 29 May 2018
Talaado 29 May 2018
Guddoomiyaha maxkamadda sare oo la dhaariyey
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dhaarieyy guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed.
Daroogada iyo Soomaalida Canada
Dilalka qorsheysan oo ku sii kordhaya Muqdisho
Bishan Ramadaan waxaa kordhay dilalka qorshaysan ee loo gaysanayo ciidamada amniga, odayaasha, shaqaalaha dawladda, ganacsatada iyo rayidka kaleba, ee magaalada Muqdisho.
Daacish oo weerar ka fulisay gobolka Bari
Maleeshiyo ka tirsan kooxda Daacish ayaa xalay waxa ay weerareen tuulada Canjeel oo u dhow magaalada Qandala ee gobolka Bari.
Sheekh Shaakir oo ka hadlay xiisadda Galmudug
Madaxa xukumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xassan ayaa sheegay in khilaaf uusan jirin, gaashaankana u daruuray baaq uga yimid dowladda oo ahaa inay shir lagu xalyinayo khilaafka isugu yimaadaan.
Sharci ma tahay xil ka-qaadista guddoomiyaha Maxakamdda Sare?
Muxuu sharciga iyo dastuurka Soomaaliya ka qabaa xil ka-qaadista uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan?
Puntland oo ka jawaabtay hadalkii Muuse Biixi
Sanad kadib xiisadda Khaliijka iyo Soomaaliya
50 qof oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen Awdal
Suleymaan: Sharci ma ahan xil ka-qaadisteyda
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ee xilka laga qaaday, Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa u sheegey VOA in uu isagu wali yahay guddoomiyaha maxkamada sare, islamarkaana aysan sharciga waafaqsaneyn xil ka-qaadistiisa.
War saxaafadeed goor dhowayd kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in xil ka qaadis lagu sameeyay Guddoomiyaha Maxakamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan, isla markaana xilkaasi loo magacaabay Baashe Yuusuf Axmed.
Faahfaahinta Khilaafka Galmudug
Khilaafkii hore ayaa salka ku hayey go’aankii la xiriiray mowqifka dawladda ee dawladda ee khilaafka Gacanka, hase yeeshee kan ayaa la xiriira heshiiska awood-qaybsiga ah lala gaadhay ururka Ahlu Sunna Wal-Jamaaca.